ह्यान्डलिङ हतियार जस्ता साधारण प्रक्रिया संग जीवाणुहरू को प्रसार र सम्भव रोग रोक्नुहोस्। हात प्रक्रिया स्तर सम्भाव्य खतरा मानव जोखिम को स्तर मा निर्भर र पनि आफ्नो व्यावसायिक गतिविधिहरू बाहिर। नियम यस्तो disinfection मात्र प्रत्येक स्वास्थ्य पेशेवर, तर पनि सडक मा एक सरल मानिसलाई परिचित हुनुपर्छ।
जो विधि हात धुने बाहिर छ? हात प्रक्रिया स्तर चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदर्शन गर्ने कार्यहरू र गतिविधिहरु भर पर्छन्। पूर्ण pathogenic जीवाणुहरु विरुद्ध छाला शुद्ध देखि यो एक निरन्तर आधारमा disinfected गर्नुपर्छ, सम्भव छैन। सामान्य निर्देशन आवश्यक लागि आधारभूत वर्गीकरण microflora ल्याउन:
सामान्य। यसलाई स्थायी बासिन्दा र सूक्ष्मजीवहरु को प्रजनन नकारात्मक एक व्यक्ति असर नगर्ने अस्तित्व presupposes। आफ्नो उपस्थिति गठन gramootritsatelnyh जीवाणुहरु रोक्न भनेर एंटीबडी प्रदान गर्दछ। सामान्य microflora आफ्नो संपूर्णता क्लीनर वा परिरक्षकों नाश छ।
क्षणिक। संक्रमित व्यक्ति वा वस्तुहरु सम्पर्कमा स्वास्थ्य हेरविचार कार्यकर्ता (वा कुनै पनि अरूलाई) अवलोकन। दुई पूरक क्षेत्रहरु विभाजित छ - pathogenic (पैदा रोग), अवसरवादी (हानि मात्र एक निश्चित कारक भने provokes)। मात्र साथ कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली मान्छे असर जो अवसरवादी सूक्ष्मजीवहरु, - साथै, त्यहाँ अर्को छुट्टै SubGroup छ।
यो हात को छाला, त्यहाँ जो समस्याग्रस्त यस्तो दूषण देखि स्पष्ट छ भन्दा समस्याग्रस्त क्षेत्रमा, हो कि उल्लेख गर्नुपर्छ। यी नङ वरिपरि रोलर्स र नङ अन्तर्गत ठाउँ, साथै औंलाहरु बीच स्पेस समावेश गर्नुहोस्।
पहिलो विधि हात देखा पर्नुभयो र रूपमा प्रारम्भिक मध्य-19 औं सताब्दी रूपमा लागू गर्न थाले आधारित छ। त्यसैले, सुरुमा यो phenol को समाधान disinfecting लागि प्रयोग भएको थियो। अब यसलाई स्वीकार गरिएको छ अभ्यास धेरै फरक तरिका।
छाला disinfection तरिकाहरू को वर्गीकरण
त्यसैले, कसरी ठ्याक्कै प्रक्रिया को एक वर्गीकरण जस्तै हात को उपचार रूपमा? हात प्रक्रिया स्तर हेरफेर तीन प्रकारका प्रतिनिधित्व छन्:
थप विवरण प्रत्येक मोड को विशेषताहरु विश्लेषण।
साधारण लुगा धुने शुद्धीकरण सबैभन्दा सरल र सुलभ तरिका हो। यसको कार्य - माटो र फोहोर सतहहरु र संक्रमित व्यक्तिहरूलाई द्वारा लगे जीवाणुहरु को एक नम्बर को समाप्त गर्न। चिकित्सा पेशेवरहरुलाई एक रोगी, लाउने, र अर्को मन्त्री वा काम अर्को ठाउँमा संक्रमण प्राप्त पछि, काम अघि आफ्नो हात धोए। प्रक्रिया को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ:
तरल साबुन। Optimally व्यक्तिगत औषधि संग, लुगा धुने लागि दुई पटक लागू गरियो।
साबुन ठोस, कम पनि दुई पटक लागू गर्नुपर्छ आवेदन बीच सुक्खामा मनमोहक।
प्रभावकारिता सरल लुगा धुने दुई पल्ट पुनरावृत्ति संग 70 भन्दा बढी प्रतिशत र प्रतिशत एकैचोटि अधिक 40 भन्दा छैन। प्रक्रिया राम्ररी छाला मा rubbed सबै आभूषण र हेर्छ, र डिटर्जेंट हटाउन सिफारिस अघि, त्यसपछि पूर्ण कुल्ला र हेरफेर दोहोर्याउनुहोस्। उपयोग साबुन छैन अतिरिक्त flavorings वा colorants बनेको हुनुपर्छ, यो तटस्थ हुनुपर्छ।
प्रशोधन चिकित्सा कर्मचारी हात स्वच्छता अक्सर विधि सञ्चालन गरिएको छ। यसलाई निम्न अवस्थामा, नियम, बाहिर छ:
निरीक्षण अघि वा रोगी संग सम्पर्क गरेर।
शरीर तरल पदार्थ संग सम्पर्क गर्नुहोस्।
पहिले र डिस्पोजेबल पन्जा प्रयोग पछि।
हेरफेर पछि voiced कैथेटर विभिन्न प्रकारका, साथै अप सेट मा।
जब रोगी हेरविचार को हेरफेर, साथै समाप्तिमा।
उपचार र निदान को लागि प्रयोग उपकरण संग सम्पर्क पछि।
अन्य अवस्थामा, संभावित हानिकारक माइक्रोबियल दूषण।
यस्तो स्वच्छ उपचार दुई चरणमा समावेश छ। पहिलो चरणको शास्त्रीय हात धुने लगे छ मा, रक्सी-समावेश घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने प्रयोग गरेर दोस्रो disinfection थपिएको छ।
स्वच्छ वा चिकित्सा हात धुने बाहिर गर्न सकिन्छ प्रकार निम्न antiseptics प्रयोग:
को bactericidal साबुन (तरल रूप मा)।
मादक समाधान, विशेष प्रक्रिया छाला लागि डिजाइन।
कुनै रक्सी35 milliliters को राशि मा औसत मा छाला नम लागू हुन्छ हो। रक्सी आधार, सुख्खा छाला को अवस्थामा प्रयोग भइरहेको अर्थ, तिनीहरूलाई बारेमा 15-20 सेकेन्ड हुनेछ RUB। द्वारा antiseptics छाला नरम र यो खर्च नगरेर देखि रोक्न ग्लिसेरिन वा lanolin एउटा सानो रकम थप्न अनुमति छन्।
सर्जिकल उपचार तेस्रो हतियार र यसरी कुल disinfection प्रक्रिया छ। यसको कार्यान्वयन सबै सहभागीहरू सर्जरी लागि महत्त्वपूर्ण छ। द्वारा निम्न अल्गोरिदम बाहिर:
हात धुने। यो छाला को उपचार पछि यो स्टेराइल सामाग्री सुक्खामा आवश्यक छ,2मिनेट लागि रहनेछ।
घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने को प्रयोग। यो हात, कलाई, forearms, आवश्यक भएमा प्रक्रिया संग। त्यहाँ यसको प्रयोगमा को राशि, र बाहुल्य को प्रयोगमा विशेष नियमहरू छन्।
यसलाई सर्जिकल हात धुने को रक्सी मा, विशेष antiseptics द्वारा बाहिर गर्न उपलब्ध गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुपर्छ। यी निम्न लागूपदार्थ समावेश:
"Lizannin" र अरूलाई।
महत्वपूर्ण दूषण संग उपचार
अलग तिनीहरूलाई सम्पर्कमा चिकित्सा कर्मियों को हात को कसरी उपचार को मुद्दा सम्बोधन गर्न आवश्यक, रोगी गरेको रगत। यस जैविक तरल पदार्थ छाला सीधै हुन्छ भने, यो अनुसार निम्न अल्गोरिदम मा कार्य गर्न आवश्यक छ:
कपडा को परिणामस्वरूप प्रदूषण हटाउन।
साबुन र पानी संग छाला सफा।
एक बाँझ डिस्पोजेबल कपडा संग प्रभावित क्षेत्र ड्राई।
घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने भएको रक्सी प्रशोधन गर्न दुई पटक।
को दूषण को पन्जा को सतह मा गिर भने, प्रक्रिया केही परिवर्तन भइरहेको छ। तिनीहरूले निम्न योजना प्रतिनिधित्व छन्:
disinfecting पोंछे संग सामाग्री देखि दूषण हटाउँदै।
पानी संग पन्जा मा हात वाशिंग।
साबुन र पानी, सुकाउने संग लुगा धुने हात।
हातमा को उपचार को लागि घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने एक एकल आवेदन।
त्यहाँ हात प्रशोधनका लागि सामान्य नियम हो। तिनीहरूले निम्न आवश्यकताहरु र सिफारिसहरू कम छन्:
आफ्नो हात धोइदिनुभएर गर्दा पानी जेट लुगा छप छैन रूपमा त, खोल टाढा रहन प्रयास गर्नुहोस्।
साबुन प्रयोग प्रशस्त फोम को गठन सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
स्वच्छ प्रक्रियाहरु लागि पानी एउटा सहज तापमान (लगभग 36 40 डिग्री देखि) हुनुपर्छ।
यस समस्याग्रस्त साइटहरु होसियार ध्यान जहाँ संचित जीवाणुहरु र हानिकारक सूक्ष्मजीवहरु को सबै भन्दा ठूलो राशि।
पानी कलाई गर्न औंलाहरु देखि बग्ने, र विपरित भनेर आफ्नो हात कुल्ला।
छाला मा कुनै पनि साबुन अवशेषहरु नछोड।
भन्दा डिस्पोजेबल reusable तौलिया वा Tissues, को वाल्व प्रक्रिया पछि सुखाने आफ्नो मद्दत नजिक प्रयोग गर्नुहोस्।
हात प्रशोधन लागि उपयुक्त घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने कसरी चयन गर्ने? एक उपकरण छनौट गर्दा, निम्न निर्देशन प्रयोग:
रोगाणुरोधी additives बिना साबुन। अलिकति माइक्रोबियल गतिविधि मात्रा कम र कुनै अवशिष्ट कार्य जीवाणुहरु पूरा गरेर सफा छ।
रक्सी बिना Antiseptics। मध्यम दक्षता संग सार्वभौमिक हालतमा छन्, यसरी गौण अवशिष्ट प्रभाव उत्पादन, जीवाणुहरू र जीवाणुहरु वाहक को संख्या कम गर्नुहोस्। आफ्नो कार्य गुणस्तर को स्थिर प्रयोग संग परिष्कृत गरिएको छ।
रक्सी संग प्रतिरोध। जीवाणुहरु वाहक कुनै अवशिष्ट प्रभाव विरुद्ध अधिकतम जीवाणु विरुद्ध प्रभावकारी मध्यम गतिविधि छ।
निस्सन्देह, स्वास्थ्य हेरविचार प्रदाता उपचार हात बाहिर गर्नुपर्छ कसरी गर्ने सल्लाह दिन्छन् विशिष्ट कागजातहरू छ। हात उपचार स्तर दबाइ को disinfection लागि प्रयोग प्रकार निर्धारण। उदाहरणका लागि, हामीलाई शल्य चिकित्सा उपचार को लागि हालतमा थप विवरण गरौं:
अल्कोहल। इष्टतम समाधान - इथाइल 70%। gramopolozhitelnyh gramootritsatelnyh र जीवाणुहरु देखि उत्कृष्ट मद्दत व्यक्तिगत भाइरस र Fungi असर गर्छ।
आयोडिन र रक्सी आधारित समाधान - कार्य को एक विस्तृत स्पेक्ट्रम। जीवाणुहरु, क्षयरोगका रोगजनकों, spores, भाइरस, protozoa र Fungi सहित देखि मद्दत गर्नुहोस्।
Iodophors। rotavirus, herpes, एचआईभी, Staphylococcus र spores लाभ उठाउन सक्छन्।
Chlorhexidine। यो कार्य को संकीर्ण स्पेक्ट्रम, gramopolozhitelnye ब्याकटेरिया, Fungi अलग विभाग उद्देश्य छ।
सबैलाई तरिका उपलब्ध शरीर कसरी सफा गर्न
अस्पताल Lyubertsy (Lyubertsy, मास्को क्षेत्र): ठेगाना, विवरण, समीक्षा
"Gelenk Narung": दबाइ, चिकित्सा समीक्षा र प्रयोगको लागि निर्देशन
तनाव के हो
रात क्लब मास्को, फोटो र समीक्षा मा "पागल Daisy"
भित्री सजावट लागि पर्खाल प्यानल। भित्री सजावट पर्खाल प्यानल
तारकीय जीवनी: Andrey Sokolov
Multivarka मा goose। हांस multivarka लागि व्यञ्जनहरु। multivarka मा Gus टुक्रा